Fandaharanasa Fid: fanohanana mivantana ny tokantrano sahirana | NewsMada
Fandaharanasa Fid: fanohanana mivantana ny tokantrano sahirana
Nitentina 37 736 895 dolara ny famatsiam-bola nampiasain’ny Fandaharanasa ho fampiasam-bola ho an’ny fampandrosoana (Fid). Mifantoka amin’ny fanampiana sy fanohanana ny fianakaviana tena marefo sady sahirana ny asany. Maromaro ny zava-bita, ny taona 2017. Anisan’izany ny tetikasa Asa atakalo vola (ACT) taorian’ny fandalovan’ny rivozoda Enawo ireny, ny Asa atakalo vola mamokatra(ACTP), nanarenana ny fotodrafitrasa simban’ny rivodoza Enawo. Eo koa ny Famatsiam-bola arahina fepetra (TMC) sy ny tsy misy fepetra, ny Famatsiam-bola hanohanana sy hanarenana, natao tany atsimon’ny Nosy, sns.
Azo fintinina ho dimy ny fandaharanasan’ny Fid. Ny Tetikasa vonjitaitra hiarovana ny fotodrafitrasa sy hampihenana ny faharefoana (Pupriv), ny Tetikasa vonjitaitra ho an’ny fiarovana momba ny sakafo sy fiarovana ny sosialy (Pursaps), ny Tetikasa Fiarovana ny sosialy sy ny famatsiam-bola fanampiny-FSS-FA) ary ny tetikasa Vahaolana mivantana (MRI).
Tohizana amin’ity taona ity
Miisa 1 155 ny asa natao tamin’ny alalan’ny ACT, ny taona 2017, ka nampiarahina tamin’ny fandaharanasa BVPI ny 66 amin’ireo ary maherin’ny 84 000 ny tokantrano nahazo tombontsoa. Niisa 386 kosa ny asa natao mikasika ny ACTP, ho an’ny tokantrano maherin’ny 27 000. Nahatratra 38 000 ny nomena vola Vatsin’ankohonana, 4 450 ho an’ny tetikasa Le us learn (LUL), ary maherin’ny 57 000 ny tokantrano nisitraka ny tetikasa Fiavota.
Santionany ihany ireo notaterina ireo fa maro koa ny tetikasa ho an’ity taona 2018 ity. Tohizana ireo efa natao ny taona 2017 (Pursaps, FSS, FSS-FA). Vita tamin’ny faran’ny taona 2017 ny Pupriv. Manodidina ny 866 ny asa voakasiky ny asa atakalo vola mamokatra (ACTP), ho an’ny olona maherin’ny 32 000. Inenina ny fanomezam-bola mivantana, amin’ny Vatsin’akohonana, ho an’ny tokatrano miisa 4 450 ary miisa 100 ny hatao amin’ny asa atakalo vola (ACT) atao aorian’ny fandalovan’ny loza voajanahary, sns. Raha aravona, mitentina 11 986 942 dolara ny famatsiam-bola ampiasain’ny Fid amin’ity taona 2018 ity.